Kooxda Manchester United oo dalab ka gudbinaysa Moussa Dembele… (Imise Milyan ayuu ku kacayaa dalabkaasi?) – Gool FM
(Manchester) 25 Maajo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay dalab ku kacaya adduun dhan 35 milyan oo gini ka gudbiso Weeraryahanka naadiga Lyon ee Moussa Dembele.
Dembele oo 22-sano jir ah ayaa shabaqa gaarsiiyey 20 gool 45 kulan oo uu xilli ciyaareedkan u saftay kooxda Les Gones lagu naanayso.
Horraantii bishaan, waxaa la wariyey in Man United ay qorsheynayso inay u dhaqaaqdo weerryahankan, kaasoo 51 gool dhaliyey 94 kulan oo uu u saftay kooxda Celtic ka hor inta uusan u dhaqaaqin Faransiiska.
Shabakadda ciyaaraha ee Goal.com ayaa warinaysa in kooxda Red Devils lagu naanayso ay dalab 35 milyan oo gini ah ku soo qaadanayso ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka Faransiiska ee da’doodu ka hooseyso 21-jirrada xagaagan marka dib loo furo suuqa kala iibsiga xiddigaha.
Haddii uu Dembele yimaado garoonka Old Trafford taasi waxa ay ka dhigan tahay in waqtigii kooxda Man United ee Romelu Lukaku uu soo dhammaaday.
Xiddiga xulka qaranka Belgium ayaa kaliya Red Devils u dhaliyey 15 gool intii lagu guda jiray xilli ciyaareedka 2018-19, waxaana haatan Lukaku la la xiriirinayaa kooxda Inter Milan ee dalka Talyaaniga.
Kooxda uu hoggaamiyo macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa sidoo kale iska diidan inay ka rajo dhigto saxiixa kabtanka Ajax ee Matthijs de Ligt, inkastoo Barcelona ay ugu cad-caddahay saxiixa 19-sano jirkaan.